Puerto Rico Tourism inochengetedza vashanyi 'hutano nekuchengeteka
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo » Puerto Rico Tourism inochengetedza vashanyi 'hutano nekuchengeteka
Nhau Nhau • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Hurumende Nhau • Hospitality Industry • nhau • vanhu • Puerto Rico Kuputsa Nhau • Kutarisirwa • chengetedzo • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Akasiyana Nhau
Kuziva kudiwa kwemipimo mitsva yekuchenesa, disinfection, hutsanana, uye mukana wekukwikwidza uyo kuiswa kweimwe nzira kunopa chiwi seyenzvimbo yekushanya, Puerto Rico Tourism Kambani (PRTC) yazivisa nhasi kugadzirwa kwechirongwa chekupa goridhe-nyeredzi yekusimbisa chisimbiso kumabhizinesi ane chekuita nekushanya. Ichi chitupa (kana bheji) chinopihwa kune avo vari kuita akakwirira matanho ehutano uye ekuchengetedza matanho. Chirongwa ichi chakagadziriswa pachishandiswa zvakaomarara zviyero, akanakisa maitiro maitiro ave achishandiswa sereferenzi, pamwe nemarairidzi uye kurudziro kubva kumasangano nemasangano anehunyanzvi pachinhu ichi.
Chinangwa chechirongwa ndechekusimudzira Puerto Rico's indasitiri yekushanya uye uiise seyero nyowani yegoridhe mune yekuenda hutano uye chengetedzo. Iyo PRTC inovavarira kuwedzera kuvimba kwevatengi mukati Pota Riko senzvimbo yekuenda yakagadzirirwa uye yakagadziridzwa kune mamiriro azvino. Kuburitswa kwechirongwa kunotanga zvinotevera Muvhuro, May 4th. Panguva iyo yekutengeserana painovhurwa uye kwairi kuenda kwave kugadzirira kugamuchira vashanyi zvekare, zvinotarisirwa kuti ruzhinji rwemabhizinesi ane chekuita nekushanya anenge achitevedzera matanho aya uye kuchengetedza kuchengetedzeka kwemunhu wese.
Iyo mbiri-nhanho system yakagadzirirwa zvichienderana nemirairidzo yekudzivirira kupararira kwe Covid-19 yakagadzwa neCentre for Disease Control (CDC), World Health Organisation, iyo OSHA 3990 mushumo, iyo Puerto Rico Dhipatimendi rehutano Hutano, Gavhuna Wanda Vazquez Garced's masimba ekuraira, uye epamusoro-maitiro mapurogiramu senge Singapore Kudzivirirwa Seal uye yeNational Restaurant Association. Chikamu chekutanga ndeye Tourism Health uye Safety Operational Nhungamiro, nhungamiro inoshanda pamwe nematanho ekumanikidza kuchengetedza hutano hwevashandi, vashanyi nevatevedzeri vemunharaunda. Yechipiri iSeal and Safety Seal; chirongwa chechitupa chevose vanobvumidzwa indasitiri yekushanya indasitiri inosangana kana yadarika kuitiswa uye kuenderera kwekuitwa kwezviyero zvakamisikidzwa.
“Aya ma" Guides guides "uye chirongwa chekupihwa zvitupa chakakosha pakuvhurwa kwenzvimbo dzekushanya nekushanya mu Pota Riko uye zvinhu zvakakosha zvinozotiisa munzvimbo inokwikwidza kana musika wekufamba uye wekushanya wavhurwa. Kana vachigadzira zvirongwa zvavo zvekufamba, vatengi vanozotarisa kwavanogadzirira zvakanak kuvapa matanho anodiwa uye zviwanikwa zvekuchengetedza hutano hwavo. Kubatana mukutora chikamu mukuitwa kwayo, zvese nemakambani nevatengi, chichava chinhu chakakosha kutora miitiro inodiwa yemunhu uye kuita mutoro wenzanga. Iyi ndiyo nzira yakanakisa yekupa veruzhinji nevashanyi nzvimbo dzekuchengetedza uye hutsanana dzavanotarisira uye dzakakodzera, "akadaro director wePuerto Rico Tourism Company, Carla Campos.
Mufambiro unosanganisira matanho akadai se: kugadzirwa kwenzvimbo dzekutarisisa dzevashandi nevashanyi, nzira nyowani yekutarisa nekuzadzikiswa kweKufamba Kwekuzivisa uye Fomu Rekutarisa, nzira dzakachengeteka uye dzekudyidzana nhungamiro pamhando yebhizinesi uye chiitiko. kurambidzwa uye nekuwedzera matanho ehutano kuzvishandira-wega masystem ezvikafu: kuwedzeredza kuchenesa uye kuuraya hutachiona; rairo maererano nenzvimbo dzekuchenesa maoko; uye kudzidziswa pamusoro pekushandiswa kwePNP - Kudzivirirwa Kwemidziyo
Aya matsva matanho ehutsanana achashanda kune ese mabhizinesi ekushanyirwa chitsuwa chakakura kusanganisira mahotera, nzvimbo dzekutandarira, paradores, posada, mubhedha & nzvimbo dzekudya, dzimba diki dzevaeni, dzimba dzevaeni, dzimba dzinogovaniswa-nguva, dzimba dzekuhota kwenguva pfupi, makasino, vashanyi vekushanya, zvifambiso zvevashanyi, zviitiko manejimendi, maresitorendi, mabhawa, makirabhu ehusiku uye zvinokwezva.